सदरमुकाम तम्घासको बन्द कोठामा मलेपः विल कै भरमा होला परदर्शिता ? | ebaglung.com
सदरमुकाम तम्घासको बन्द कोठामा मलेपः विल कै भरमा होला परदर्शिता ?
२०७५ भाद्र १४, बिहीबार ०७:२८	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार गुल्मी २०७५ भदौ १४। यति बेला गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामको एक बन्द कोठामा जिल्ला भर तोकिएका स्थानिय तहको लोखा परिक्षण ।९ मलेप ० गर्न भ्याई नभ्याई छ, केन्द्रबाट आएको मलेपको टोलीलाई । सदरमुकाम तम्घास स्थित जिल्ला प्रविधिक कार्यालयको एक कोठा भित्र केहि स्थानीय तहको लेखा परिक्षण सकिएको छ भने अरु थुप्रै स्थानितहको गर्न बाँकी छ । गाउँ गाउँबाट स्थानिय तहले हिसाव किताव मिलाएर श्रेस्ता कुम्लो पार्दै पठाउँदै छन् ।
खरका छानारहित पालिका बनाउने अभियानका क्रममा हरेक स्थानिय तहमा गत बर्ष करोडौंको जस्तापाता खरिद गरियो । लाखौ मुल्यका फर्निचर खरिद गरियो । करोडौको भौतिक पुर्वधारमा रकम विनियोजन भयो । केहि गाउँपालिकाहरुले मोटर साईकलहरु किने । कार्यालय सञ्चालनका लागि अन्य थुपै्र सामग्रीहरु पनि खरिद भयो । ती सामग्री मलेपलाई प्राप्त बिल अनुसार त्यति कै छन कि छैनन । सोही अनुरुपको बिकास निर्माण भयो कि भएन रु स्थलगत अवलोकनबाट प्रमाणित नगरी विल कै भरमा मलेप पास गराउँदा कमिशन र भ्रष्टचारले मल जल पाउला कि नपाउँला रु
आखिर विल मात्रैले चल्ने भए समान गरिद गर्न किन पो पयो रु त्यसरी स्थानिय तह मै नपुगी गरिएका मलेपहरु औपचारिक प्रकृया मात्र भई झारा टराई त होईन रु यस्ता सवाल सर्वसाधरणले उठाए पछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालको ध्यानकृष्ट गराएका थियौं ।
पौड्याल पनि स्थानिय तह मै पुग्न सके बास्तविकता आउनेमा घुमाउरो पाराले जोड दिन्छन । उनि भन्छन–‘ यो विषय तपाईहरुले उठाउँदा गुल्मेली जनता निकै सचेत हुनुहुन्छ भन्ने लागेर खुशी लाग्यो । यो कुरा जायज हो । जिल्ला प्रशासन कै समन्वयमा उहाँहरुले मलेप गर्दै हुनुन्छ । हामीले उहाँहरु संग थप समन्वय गरेर त्यस्ता बिषयमा ध्यानकृष्ट गराउने छौं । ’
ताराखोला गाँउपालिका बडा नम्बर ४ मा स्वास्थ्य ईकाई गठन गरिने !
म्याग्दीमा आफ्नै छोरीलाई बालात्कार गर्ने बाबु प्रहरी नियन्त्रणमा !